कसरी रहलान् एकै जंगलमा दुई शेर ? - HKNepal.com - First Nepali Internet Magazine Hong Kong | एचकेनेपाल डट कम
एमाले अध्यक्ष एवंम प्रधानमन्त्री केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मिलेर एउटै पार्टी बनाउने करिव टुंगो भएपछि स्वभाविक रुपले भन्न थालिएको छ, दुई शेर मिलेको कम्युनिष्ट पार्टी। एउटा जंगलमा दुई शेर सिंह भए भने राज कसले चलाउने भन्ने विषयमा ठुलो लडाईँ हुन्छ।
केही समय ठुलो सिकार गर्नुपर्यो भने एकआपसमा मिले पनि अन्ततः भागबन्डा मिलने भने ठुलो लडाईँ हुन्छ ।
यही प्रश्न उठेको छ, ओली दाहालबीच एकतापछि भागबन्डा मिलेन भने के होला ?
एउटै म्यानमा दुई तरबार रहलान् त ? एउटै जंगलमा दुई शेर रहलान त ? भन्ने उखान पनि छ।
यी सबै उखान र वितगका अनुभव छन् । हामीले असम्भव देखिने कुरालाई सम्भव बनाउनुपर्छ र मानव जातिलाई योगदान दिन सकिन्छ भन्ने बुझाएमा स्पष्ट छौँ, दाहालले हालै अन्तर्वार्तामा भनेका छन् । के उनले भनेजस्तो एक म्यानमा दुई तरवार अट्लान् वा एक जंलमा दुई शेर कसरी मिलेर बस्लान् ?
ओली र दाहालबीच पाँच बर्ष सरकार चलाउनेबारे प्याक्ट भएको छ ।
अनौपचारिक सहमित अनुसार ओलीले तीन दाहालले दुई बर्ष सरकार चलाउने कुरा भएको छ ।
पार्टी र सरकार आलोपालो प्रमुख हुने अनौपचारिक सहमति पनि सर्वाजनिक भएको छ ।
यद्यपी प्रचण्डले सबै कुरा पार्टी एकतापछि हुने महाधिवेशनले तय गर्ने घुमाउरो जवाफ दिएका छन्। कान्तिपुरमा गंगा बीसीले लेखेको टिप्पणी छ।